Ultimate Guide pamusoro pekuona nekutevera nhamba yefoni October 19, 2018 arun
Kana iwe uri maneja anoda kutsveta pamusoro pevashandi vavo kana mubereki anoda kutevedzera vana vavo, inguva iwe yekuziva nzira yekutevera nhamba yefoni.
Zvingaita here tevera nhamba yenhare? Zvamazvirokwazvo! Tisati tapinda muzvikamu zvepamusoro zvemusoro wenyaya, ngatitangei kutanga nekuti nei vanhu vachida kutevera mumwe munhu kuburikidza nefoni mbozha pakutanga.
Pane zvikonzero zvakati kuti nei vanhu vade kutsvaga nhamba yefoni mbozhanhare. Heano mashoma:
Iwe hauna kukwanisa kupindura kufona kubva kunhamba isingazivikanwe.
Mumwe munhu arikukunetsa nekukufonera kakawanda, kunyangwe munguva yehusiku.
Iwe unoda kuchengetedza mhuri yako kubva kunogara uchifona kubva kunhamba isina kunyoreswa.
Iwe unoda kuziva nzvimbo chaiyo yemukadzi wako nevana.
Iwe wakarasa nharembozha yako uye waida kuitevera.
Iwe unoda kugara uchiteedzera zviitiko zvefoni zveumwe munhu.
Izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero nei mumwe munhu angade kuteedzera nhamba yenhare. Iwe unogona kunge uine mazano akasiyana mundangariro, zvingave zvewe kana bhizinesi. Chero chinangwa chako chingave chiri, iwe unogona kuvimbiswa kuti mushure mekuverenga ichi chinyorwa, iwe unoziva nzira yekutevera imwe nhamba yefoni mbozhanhare.
Tsvaga Nhamba Yenhare Uchishandisa Spy Application
Ichauya nguva yauri kuda kupfuura nzvimbo yeGPS yenhamba yemuridzi wefoni. Mune ino kesi, sarudzo yakanakira iwe ndeye kushandisa spy basa kubva kune wechitatu wechitatu. Ivo vanoshandiswa zvakanyanya mazuva ano, saka hazvizove zvakaoma kuti iwe uwane inoshanda pane webhu. Tarisa uone kuti idzi spy App dzakasiyana uye ane mutsauko wawo uye zvinangwa.
Kune anopfuura 50 spy apps zviripo online, asi mashoma chete acho akakodzera kuti utarise.
Heino runyorwa rweakanakisa spy software ese ari maviri eAppre uye iOS kuti atore nhare mbozha:
1. mSpy - Iyi spy software inoonekwa seyakanakisa yeiyo iPhone. Ingoisa iyo mSpy application pafoni yaunoshuva kutevedzera uye kuishandisa kuburikidza rako rezinesi kodhi Mushure meizvozvo, unogona kutsvaga chiitiko chefoni mbozha uchishandisa webhusaiti yepamhepo.
Kana iwe uine chinangwa chekutarisa mukadzi wako nevana, iyo mSpy app ndiyo yega iwe. Semuenzaniso, mwanasikana wako anokuudza kuti ari kuenda nedzimwe shamwari. Hazvina kukwana kuti ubvunze iye kuti akuwedzere nguva dzose pane kwaari kupi. Kuve nechokwadi chekuchengeteka kwake, iwe unoisa iyo mSpy app pa iPhone rake. Nenzira iyi, iwe uchanyatsoziva kwaari iye pasina kusiya imba yako.
Paunenge iwe uchangobva kuita yako mSpy, unogona kare kupinda yavo yepamhepo portal kuti uwane ruzivo kubva pafoni foni yauri kutarisisa, sekufonera foni, mameseji uye kutumira mameseji, kushambadzira nhoroondo, uye zvechokwadi, yavo GPS nzvimbo.
Iyo mSpy app inogona kunge iri nyore kushandisa, asi inouya neyakajairika maficha ayo iwe ungafarire:
Kutungamirirwa Kwevabereki. Chimwe chikonzero chikuru nei mSpy iri inoshanda mukuchengetedza vana vako. Kudzora kwevabereki kunoita kuti ugone kuvhara mafoni anouya uye mawebhusaiti asina kukodzera. Zvinoita zvakare kuti utore kudzora kuti ndeapi maficha anogona kuwanikwa kana mwana wako achishandisa mbozhanhare.
Hapana Chinodiwa Jailbreak. Kana iwe usinga zive pamusoro payo, jailbreak inzira yekugadzirisa nharembozha senge smartphone, kudzima zvisungo zvinomanikidzwa neanoshanda kana mugadziri. Semuenzaniso, kuitira kuti igone kuiswa kwesoftware zvisiri pamutemo.
Keylogger. Keystroke danda, inowanzozivikanwa senge keyword kutora kana keylogging, ndiyo maitiro ekunyora makiyi anoshandiswa pane kabhodhi. Munhu arikuteedzerwa haazive nezvese maitiro. Kana mwana wako ari kushandisa messaging app iyo mSpy isingakwanisi kuwana zvakananga, iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchikwanisa kuwana kune izvo zvavari kunyora. Kuburikidza neiyi keylogger chimiro, iwe unozoziva kana mwana wako ari kuita zviitiko zvine ngozi uye anogona kuita zvakananga pairi.
Monitors Social Media Zviitiko. Chizvarwa chedu chiri zvese nezve tekinoroji. Hazvichisiri kushamisika kuti vechidiki uye vana ikozvino vari kushandira pane angangoita ese midhiya mapuratifomu. Asi, hatigone kuramba kuti vezvenhau vanogona kushandiswawo kukuvadza vechidiki vasina mhosva. Iwe unogona kuchengeta uone zvemwana wako zvemagariro ezviitiko zviitiko kuburikidza ne mSpy app.
Mac uye Windows enderana. Iyo mSpy app haingowirirana chete neApple uye iOS, asiwo neMac uye Windows makomputa. Uine account imwechete, unogona kuteedzera akawanda madhijitari.
2. Highster Mobile - Nepo mSpy iri yakanakira iyo iPhone, Highster Mobile inozivikanwa kuva ndiyo yakanakira madivayiri eApple. Kuisa iyo yakafanana mSpy. Dhawunirodha chinyorwa uye chiise pafoni yaunoda kutarisira. Mushure meizvozvo, pinda rako rezinesi kodhi, uye iwe unogona kutanga kushandisa iyo app.
Iyi spy app ingangodaro inodhura kwazvo pa $ 69.99. Izvo hazvina akawanda maitiro achienzaniswa nemSpy. Asi, iyo inobatsira app kana iwe uchida kutevedzera iyo kifaa Android.
Zvimwe zvinhu zvaunogona kunakidzwa neHarsterster Mobile app zvinosanganisira zvinotevera:
Kuongorora ezve media media zviitiko. Tarisa zviitwa zvemunhu mumagariro ehurukuro dzakakura se Facebook, Snapchat, uye WhatsApp. Iwe unoona iyo hurukuro yose yevari kutaura nani. Neichi chimiro, iwe uchaona kana paine kufungidzira maitiro kana kana munhu wauri kutevedzera anogona kunge ari mungozi.
Wona zvigadzirwa zvefoni mbozha. Unogona kutarisa zvimwe zvekushandisa zvavakaisa, zvinyorwa zvavo zvekarenda, uye avo vanobata navo. Izvi zvinobatsira sezvo iwe uchizive nezve masheti avo uye kana iwe usingakwanise kusvika kwavo mbozhanhare, unogona kufonera mumwe munhu kubva kune vanobata navo kuti uzive zvauri munhu wauri EPUB zviri pamusoro.
Kuwana kwavo Kuvhurika Nhoroondo. Vana vadiki sevatatu vanoziva nzira yekufamba-famba pasi rese pawebhu. Kana iwe uine mwana uyo ane runharembozha, zviri nani kuti iwe uchengete nhoroondo yavo yekubhurawuza. Kune masosi pawebhu anogona kuratidzika seanokuvadza, asi anogona kukanganisa zvakanyanya kuvana.
Kuwanika kune yavo yemifananidzo gallery. Zvinogona kuita sechinhu chisina basa, asi kukwanisa kuona mafoto avo kunokuzivisa iwe kana vari kushandisa avo mafoni mafoni. Iwo mapikicha akatorwa mumakamera avo anozoiswa kune yako Highster Mobile account.
Kuwanikwa kune avo ekufonera matanda. Kukwanisa kuona nhoroondo yavo yekufona inokupa zano pane kwavari kuenda, vaari nani, uye zvavachange vachiita. Iyi ficha ichaita kuti iwe ugone kutarisa pamusoro pevadiwa vako pasina tagging pamwe mune yavo yezuva nezuva zviitiko. Neichi chiitiko, iwe unokwanisa kuwana kune avo akafirwa mafoni, akagamuchira mafoni, mafoni akaitwa, kutaurirana, nguva, nguva, uye zuva renhare idzi.
Kuwanikwa kwavo mameseji mameseji. Iwe unozoverengera yavo ese mameseji, kusanganisira iyo yakadzimwa. Kuisa spyware application pane wemumwe munhu nhare iri kupinda mukati mekuvanzika kwavo. Asi, kana vana vako vari pasi pekutarisira kwako, zvakakodzera chete kuti iwe ugone kuwana avo mafoni. Haufanire kuverenga meseji yavanotambira kunze kwekunge uine chikonzero chakaringana.
GPS yekutevera. Izvi zvinokugonesa kuti uone nzvimbo dzavari kuenda. Iwe unozoziva zvizere nezvekwavari nekutarisa nzvimbo dzavo pamepu inoratidzwa pane webhusaiti yepamutemo webhusaiti.
3. FlexiSPY - FlexiSPY ndeimwe yemasipositi akasimba ekushandisa zviripo. Iyo ine akawanda maficha, asi, chii chinomira ndeche Call yavo Kupinda. Ichi chimiro chinokubvumira kuti uteerere uye kurekodha foni kutaura zvakavanzika. Nekudaro, iwe unogona chete kushandisa ichi application kana iwe jailbreak yako iPhone kana mudzi mudziyo wako Android.
Kana iwe uchida kushandisa iyi spy app, unofanirwa kuenda ku jailbreak kana midzi mudziyo wako wekutanga. Mushure meizvozvo, chiisa uye chigadzirire icho pane chako chinangwa chefoni. Kana yaiswa chete, ichatanga kurekodha zvaitwa nefoni zvisina mwero. Kana tichiti chiitiko chefoni, zvinoreva zvese zviri kuitika mufoni yemuridzi. Izvi zvinosanganisira kutumira mameseji, senge Facebook, Skype, WhatsApp, nezvimwewo, masocial media mapuratifomu, mapikicha emifananidzo, email, mameseji mameseji, GPS, kufona matanda uye kufona kurekodha.
FlexiSPY yakaburitswa ichitenderedza 2006 uye ichiri kufarirwa nevakawanda nhasi. Iyi spy software inouya mune shanduro mbiri, iyo Premium Version, uye iyo Yakanyanya Shanduro. Iyo yePrimum Version inopa zvese maficha aunoda kubva kune spy software. Asi, iyo Yakanyanya Shanduro inopa mafambiro epamberi asina kuwanikwa mune mamwe mahara spy software.
RemCam -Chinhu ichi chinokutendera kuti uwane kamera uye utore mifananidzo muchivande kuitira kuti iwe uve nemafungiro akanaka panharaunda yemunhu wauri kutevedzera.
Rekodha zvakakukomberedza. FlexiSPY zvirokwazvo ndiyo yekupedzisira spy ekushandisa. Ichi chimiro chinokutendera kuti uwane maikorofoni uye rekodhi zvakapoteredza munhu, saka iwe uchanyatsoziva zviri kuitika. Zvakarekodwa zvacho zvinoremerwa uye zvakachengetwa pane yako account. Izvi zvinogona kuita sezvakanyanya, asi, zvinobatsira, kunyanya kana iwe ukaona kuti mwanakomana kana mwanasikana wako ari kusangana nemunhu wausingazive. Kukwanisa kuteerera kutaura kwavo kuchavimbisa kuti vana vako vakachengeteka.
Rekodha hurukuro dzefoni. Iwe haufanire kuteerera kwese kufona kwavanoita. Asi, nekuda kwezuva ramangwana, idzi hurukuro dzinoponeswawo uye dzinoiswa paakaunti yako. Izvi zvinorega iwe uine zano pane zviri kuitika nehupenyu hwemunhu kana ivo vasiri pedyo newe.
Rarama kufonera kusangana. Iwe unozogona kuteerera kune-kuenda-kufona iyo munhu arikugadzira.
Kunyange izvi zviga zvichabatsira kana zvasvika pakachengeteka, ita shuwa kuti hausi kuvabata zvisina kufanira. Teerera uye utevere ivo chete kana uchifanira. Ramba uchifunga kuti ivo vanofanirawo kuvanzika kwavo.
FlexiSPY inogona kunge iri yekupedzisira spy software, asi zvakare iri kudhura. Kana ino inguva yako yekutanga yekutevera nhamba yenhare, zviri nani kana ukatanga neakareruka uye akadhura.
4. iKeyMonitor - Kana chiri keylogging iwe uri mushure, iyi spy app inogona kungova izvo zvauri kutsvaga. IkeyMonitor haisi kunyanyisa seFlexiSPY, asi yayo keylogging pfuma iri pa. Inotendera iwe kuti uteedzere mameseji avo mameseji, mawebhusaiti avakashanyira, mameseji pakarepo, uye vanorekodha kiyi yega yavakarova Zvese ruzivo rwunotumirwa zvakananga kune iyo email yawakapa. Iyo interface iri nyore kufamba. Iyo iripo pasi ndeyekuti iwe unoda kurovera jailbreak yako iPhone kutanga usati waisa iyo app.
Mamwe mabhenefiti iwe aunowana kana iwe ukaisa iyo iKeyMonitor ndeiyi:
Muedzo wemazuva matatu wemahara. Unogona kuedza iKeyMonitor kutanga kwemazuva matatu kuti uone kana uchida kutenga programu yacho kana kuti kwete.
Inotsigira mitauro yakawanda. Iyi spy app inoita kuti usarudze mitauro yakadai seChirungu, Spanish, Russian, Germany, French, nezvimwe.
Inobata skrini. Ichi chishandiso chinobata chidzitiro pameso penhare yacho ichichinja. Kuburikidza nechinhu ichi, iwe uchagona kuona akasiyana masevhisi ari kushandiswa nemunhu, uye mawebhusaiti avakashanyira.
Zvitoro mapassword. Sezvo kiyi imwe neimwe yakarova pane yefoni nhare yakanyorwa, iwe uchaziva mapassword avanopinda maakaundi avo.
Keylogging. Chinangwa chekutanga cheKeyMonitor spy app ndeye kukodha matanda. Izvi zvinoreva kuti zvese zvakadhindwa panharembozha zvicharekodwa zvobva zvachengetwa. Izvo hazvina basa kuti iappi yavari kushandisa, ruzivo rwese rwakadhindwa runyorwa. Iwe unozoziva zvizere nezve chero kutaurirana sekukurumidza uye kutumira mameseji.
Iyo iKeyMonitor inongoshanda paApple nharembozha dzinomhanya iOS 6.0 uye gare gare. Tarisa uone kuti jailbreak iyo iPhone, iTouch, kana iPad kutanga usati washandisa App.
5. XNSPY - Imwe inobatsira spy app iyo ichakubvumidza kuti uzive zvizere nezvezviitiko zvemuridzi wefoni. Heano mamwe maitiro aunowana kuti unakirwe paunoshandisa iyo XNSPY app:
Monitors mameseji mameseji uye foni foni. Sezvaungave waona, chimiro ichi chiripo mune zvese spy software. Iyo yakanaka yakadzika, asi chinhu chakakosha. Iwe uchave nekwanisiro yekufona matanda, mameseji mameseji, uye anokuzivisa iwe kana foni mbozhanhare inogamuchira runhare runouya.
Kuwanikwa munhau dzemagariro uye nhoroondo dzekutumira nekukurumidza. Iwe unozoverengera kukurukura uye kutarisa mafoto pane avo ezvenhau uye IM account, akadai sa Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Tinder, Skype, Kik, uye iMessage.
Kana iwe ukaronga nezvekutenga XNSPY, ivo vane prerequisites iyo iwe yaunofanirwa kutanga watevera usati iwe unowana kunakirwa kwavo. Tora nguva yekuverenga pano.
Yakakosha Pfungwa Usati Watenga App Spy
Kuti iwe uratidze nhare mbozha, iwe unofanirwa kuve nekuwana kwemuviri kune foni mbozha. Iwe unofanirwa kutora pasi spy software uye kuiisa pane iyo foni mbozhanhare. Izvi zvakakosha kwazvo. Vamwe vanovhiringika kana zvasvika pakuisa iyo app. Inofanirwa kuisirwa mufoni yakanangwa, kwete foni yako kana komputa.
Mazhinji spy software inoda kuti jailbreak iOS zvishandiso uye midzi Android zvishandiso kutanga izvi zvisati zvaitika.
Usati watenga spy software, tarisa kaviri kana ichienderana nefoni mbozhanhare yaunoda kutarisa.
Kurodha pasi spy App kunoda internet internet. Ita shuwa kuti foni inotariswa ine cellular data kana yakabatana neWi-Fi.
Tarisa uye enzanisa akanakisa spy mapurogiramu anowanikwa pamusika. Sarudza zvaunoda kuti spy software ikuitire iwe. Tarisa bhajeti rako uye ona kuti chii spy app chinokodzera kwazvo chinangwa chako uye muhomwe.
Tenga iyo spy software. Mushure mekutenga, kambani inozokutumira iyo email ine yako login info nemirairo yekuodha.
Dhawunirodha programu yacho pane foni mbozha yaunoda kuongorora uye kuiisa.
Mushure mekuisa iyo app, unogona kutanga kutarisa foni mbozhanhare kuburikidza nekambani yewebhu-based interface.
Tevera Nhamba Yenhare Pasina Kushandisa App
Kushandisa spyware programu kutsvaga nhamba yefoni uye kuidziridzwa yezviitiko zvefoni mbozha ndiyo nzira inoshanda kwazvo. Nekudaro, kana chinangwa chako chiri chekutarisa nzvimbo yenhare mbozha chete, unogona kuzviita kunyangwe pasina kurodha pasi chero programu.
Zvinoitwa sei? Zviri nyore.
Shandisa Google Mepu
Heino muenzaniso pane kuti icharatidzika sei kana iwe ukatsvaga inzvimbo yefoni mbozhanhare.
Heano yakanakira nzira yekutevera nharembozha uchishandisa Google Mepu.
Nehurombo, ine zvipingamupinyi. Iyo data yakaratidzwa haisi chaiyo-nguva. Saka, zvauri kuzoona paunowana nzvimbo dzenhare dzese kubva kare. Zvakare, zvinogona kuti iwe uchave nenyaya nenyaya dzechokwadi. Pane dzimwe nguva idzo Google icharasikirwa neyakananga mapoinzi uye iyo pikicha yekupedzisira haigaro kupindirana neicho chokwadi
Kana iyi isiri nyaya hombe newe uye uchiri kuda kushandisa Google Map, tevedza matanho aya:
Pinda muGoogle. Akaunti yakasaina inofanirwa kunge yakafanana pakombuta uye foni mbozha yaunoda kutsvaga.
Tsvaga sarudzo yekugadzirisa uye vhura pane yenhoroondo yenzvimbo sarudzo. Heano maitiro ayo:
Shandisa Tsvaga iPhone Yangu
Yunivhesiti ye iPhone ine pre-yakaiswa app, Tsvagai iPhone Yangu, iyo inogona kuwana mudziyo kana ikanganisika kana kubiwa. Kana iwe uine iyo yekudhara info yeumwe munhu iCloud, iwe unogona zvakare kushandisa ino ficha. Kuburikidza neapp iyi, iwe uchave unokwanisa kuwana iyo mobile unit nzvimbo. Nekudaro, chimiro ichi hachitsigiri nhoroondo yenzvimbo.
Ramba Uchifunga: Iwe unofanirwa kuziva kana munhu achinge achinge achinja ake iCloud kana maGoogle account uye anofanirwa kuramba achiwana iwo. Ukasadaro, haugone kuongorora nzvimbo yavo.
Google Mepu uye Tsvaga iPhone yangu yakanyanya kunaka. Sezvaungave iwe waona, hazvisi izvo zvaunoona sekuteedzera chaiko. Nekudaro, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchangobva panowanikwa nharembozha, vanogona kuuya zvakanaka.
Dhawunirodha Nhare Yekushandisa Tracker
Kana Google Mepu uye Tsvaga My iPhone haina kukwana iwe, unogona kudhinda uye kuyedza nharembozha tracker. Pazasi pane mamwe mameseji akanakisa ekutevera nhamba yenhare:
Iwe uchakwanisa kuongorora mafoni - iyo nguva, nguva, uye nhamba yakafona. Asi, iwe haungazive chero nezvekufona kwanga kuri nezvei.
Iwe unozogona kuronda mameseji - iwe uchave uine mukana wezita uye nhamba yeanogamuchira, iyo zuva uye nguva iyo meseji yakaunzwa, uye kunyanya kukosha, zvirimo zvemashoko. Kwete chete iwe unokwanisa kutarisa mameseji mameseji, asiwo izvo zvakagamuchirwa kubva kune mameseji ekutumira mameseji, akadai seMessage, Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, nezvimwe.
Iwe unogona kutarisa kuongorora matanda - Ichi chinhu chakakosha kune vabereki vanoda kuchengetedza webhusaiti iyo vana vavo vari kushanyira. Kwete chete iwe unokwanisa kuona mawebhusaiti avanoshanyira, asiwo nekushanya kwavo kwavanoashanyira. Iwe zvakare uchange uine mukana wezuva uye nenguva yavakashanyira masosi aya.
Unogona kutarisa nhoroondo yenzvimbo yavo - Chikonzero chikuru nei mumwe munhu angade kuteedzera nhamba yenhare ndeyekuti ivo vari kuda kuvezwa nekwaarizvino munhu. Izvi zvakajairika kuvabereki. Nge ichi chishandiso, iwe uchaziva kune vako vana nguva dzose.
Keylogging - Sezvambotaurwa pamusoro apa, keylogging inotendera iwe kuti uwane imwe neimwe kiyi muridzi wefoni typed pamaselula avo. Kuburikidza nechinhu ichi, iwe uchaziva manenji emaakaunti avo, nhamba dzavakadura, mameseji avakatumira, uye mawebhusaiti avakashanyira.
Zvimwe zvekutarisa maficha - FoneMonitor inopawo mamwe mabasa ekutarisa, sekuwana mukana wekufambidzana, dzimba dzefoni, uye zvimwe zvinoshandiswa zvakaiswa pane yeyuniti.
Zviri nyore kushandisa. Hapana kudikanwa kweruzivo rwega rwakasiyana rwekushandisa App. Ingoodha uye uiise. Mushure meizvozvo, iwe wakanaka kuenda.
Unogona kuteedzera munhu wacho pachivande.
Kutsvaga mune chaiyo-nguva. Saka, kana iwe uchida kutevedzera vana vako uye ona kuti vakachengeteka, iwe unogona kudaro neiyi app.
Inoshanda zvese zviri zviviri maIOs uye Android.
Hapana kudiwa midzi midzi yako Android uye jailbreak yako iPhone kuisa programu.
App yacho iri kudhura.
Nepo vazhinji vachishandisa iyo kuchengetedza kwevadikani vavo, vamwe vanogona kuishandisa vaine zvakaipa zvakaipa.
Kune Android mayuniti, iwe une sarudzo mbiri: Yekutanga uye Yekupedzisira Dhindaina Ronga. Iyo Yekutanga Chirongwa ichadhura iwe $ 29.99 pamwedzi, nepo iyo Ultimate Edition Chirongwa ichiita $ 39.99 pamwedzi. Kune vashandisi veApple, unogona kuwana iyo app ye $ 39.99. Asi, kana iwe uchida kubhadhara kweanopfuura mwedzi, unogona kuwana mutero.
Google Tsvaga Mudziyo Wangu - Ichi chishandiso chinobvumidza iwe kure kure kutarisa, kukiya, uye kubvisa data pafoni yakabiwa kana yakarasika. Iwe unogona kuona kunyange hupenyu hwasara hwebhatiri uye iyo Wi-Fi network yakabatana nayo. Kunyange paine nzira dzakawanda dzekutevera nharembozha, iyi App ingangodaro iri nyore nzira yekutevera yako Android chizi.
Ichi chishandiso chinoda kuti nharembozha yako imhanye Android 4.0 Ice Cream Sandwich uye kumusoro kuti iite basa. Iwe unofanirwa kutarisa yako yekushandisa system kutanga kana ichienderana nezvinodiwa.
Mashandisiro Ekushandisa Iyo Tsvaga Mudziyo Wangu App:
Kana uchinge uchinge uchidhawunirodha uye nekuisa Tenga Chishandiso Changu, iwe unofanirwa kupihwa saini neGoogle account yako. Unogona kushandisa akawanda account. Iwe unogamuchira yekudonha-pasi menyu kuti ugone kusarudza iyo account yauchazoshandisa.
Vhura iyo Tsvaga Mudziyo Wangu App kubva pafoni yako.
Sarudza iyo Google account yaunoda kutevedzera.
Isa iyo password account.
Ipa nzvimbo yekuwana iyo yekushandisa.
Maitiro Ekutarisa kana Uri Kuonekwa NeApp
Paunenge uchinge wapinda mukati, uchaona zvinotevera: mepu inoratidza yako yauripo nzvimbo, muenzaniso wechigadzirwa chako, uye pekupedzisira, sarudzo mbiri - Gonesa Lock uye Kubvisa, uye Play Mutsindo.
Kana iwe wakasaina iyo account mune anopfuura zana chishandiso, unogona kusarudza imwe mudziyo kuburikidza nekutarisa sarudzo dziri kumusoro kwedenga rako.
Zarura iyo Tsvaga Mudziyo Wangu App.
Sarudza foni yako kubva pane zvingasarudzwa zveunharembozha padenga repamusoro rekrini yako.
Tarisa uone kana foni yako yaonekwa.
Kana yako runhare unit isingawanikwe, zvinogoneka kuti ako nzvimbo masevhisi anorambidzwa. Tsvaga Mudziyo wangu unoenderana neGPS yekutevera nharembozha. Saka, iwe unofanirwa kumisa yako masevhisi nzvimbo.
Bvisa Zvirongwa kubva paruoko nhare yako.
Gonesa nzvimbo dzako masevhisi.
Maitiro Ekuwana Chishandiso chako Uchishandisa Internet
Nekushandisa internet, zvinova nyore kutsvaga chero chinhu chinosanganisira nharembozha. Iwe unogona kutsvaga nharembozha yako kuburikidza neye webhusaiti Tsvaga Mudziyo Wangu kana ukarasika kana kurasikirwa nefoni yako.
Pinda iyo webhusaiti yeku Tsvaga Changu
Saina neakaunti yeGoogle yawaishandisa kuisa programu.
Ona kana nharembozha yako iripo.
Maitiro Ekugadzira Yako Nhare mbozha Yekuridza Uchishandisa iyo App
Kana iwe uri kuyedza kutsvaga foni yako zvisizvo, unogona kushandisa iyo Play Sound chimiro cheapp. Ichaita kuti mbozhanhare yako ichirira zvakanyanya kwemaminitsi mashanu. Icharamba ichiridza ruzha nyangwe foni yako iri pakunyarara kana kuti vibrate mode.
Izvi ndizvo zvaunofanira kuita:
Enda kune Tsvaga Yangu mudziyo kuti uwane yako foni.
Sarudza Play Play Feature.
Dzima kurira kana uchinge wawana nhare mbozha.
Maitiro Ekukiya Yako Nhare mbozha neApp
Tsvaga Mudziyo Wangu unopa dhizaini rekuvhara iro rinoda kuti iwe uise imwe password kuti uwane nhare mbozha Iwe zvakare unokwanisa kuratidza meseji pane yako yekukiya skrini uye isa bhatani rekufonera kuti udzoke kuitira kuti iye munhu anowana foni yako akurumidze kusvika kwauri.
Tsvaga mbozhanhare yako paapp.
Gadza meseji nenhamba kwavanogona kusvika iwe zvinoratidzwa kukiya yekuvhara.
Sarudza Lock zvakare.
Maitiro Ekubvisa Dhata pane Yako Yakarasika Nhare mbozha
Iwe unogona kubvisa iyo data kubva pafoni yako yekufambisa kana uchitenda kuti hauzomboidzore. Kunyangwe foni yako yadzimwa, data rese richiri kudzimwa. Zvichienderana nemugadziri, iyo data iri pane kadhi re SD inogona zvakare kubviswa. Asi, izvo hazvisi 100% vimbiso.
Simbisa kudzimwa kwedatha nekusarudza iyo Erase sarudzo.
Mhuri Locator Mapurogiramu
Paunongova mubereki, kunetseka kwako kunogara kuri kana vana vako vasipo pedyo newe. Unonetseka kuti vangave vaitei, ndivanaani, uye kwavanogona kunge vari. Neraki kune vabereki nhasi, vanogona kuteedzera zvinoitwa nevana vavo uye nezvekwavari kuburikidza neaya mafoni mudziyo tracker apps.
Kune akawanda emhuri locator maapp anowanikwa. Pazasi pane zvimwe zvinonyanya kushandiswa tracking mobile zvirongwa zvevana:
Upenyu 360 Family Locator
Iko kwekutanga kushandiswa kweichi chishandiso ndechekuti vabereki vawane uye kutaurirana nevana vavo ipapo. Inowanikwa kurodha pane zvigadzirwa zveApple, Apple, uye Blackberry. Izvo zvinouya nemepu inokuzivisa iwe kana munhu wauri kutevera achisvika kune imwe nzvimbo yekuenda.
Iyo inoratidzira yeiyi App ndeye yavo Family Channel chimiro. Iyo inobvumira mitezo yemhuri kuti irambe ichionana nemumwe panguva imwe chete. Inokuyambirawo kana imwe yemhuri ichisvika kune imwe nzvimbo yakatarwa.
Iyo inouya neCrash Detection chimiro, maunogona kupa rubatsiro kune mutyairi kana vakasangana netsaona
Inogona kuridza runhare mbozha yako kana ikabiwa kana kurasika.
Izvo zvakasununguka kurodha uye kuisa.
Sygic Mhuri Inowanikwa
Iyi mhuri locator app yakapihwa neMubereki Akaedzwa Mubereki Yakatenderwa.
Iyo app inoenderana nemapuratifomu akasiyana. Nekudaro, kana iwe pamwe nemitezo yemhuri yako uchishandisa mhando dzakasiyana dzemafoni, unogona kugona kutaurirana uchishandisa iyi App.
Iwe unogona kugadzirisa nzvimbo dzine njodzi, uye uchaudzwa kana nhengo yemhuri ikasvika panzvimbo iyoyo.
Iyi App inogashira yambiro kana mumwe munhu angave ari munjodzi. Nekudaro, idzi meseji dzinozotumirwa kwauri.
Inoshanda senge isina mugero mode GPS yekufamba.
Iwe unogona kuikopa mahara. Asi, ivo zvakare vane yekutanga premium inopihwa.
Iyi App yakanakira vana vadiki. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uine wechidiki kana wechidiki mukuru, zvakanaka kana iwe ukafunga nezve mamwe mafoni tracker apps.
MhuriWall ye Sprint
Kukurukurirana kuri nyore. Kunyangwe kana usiri pamwe chete mumuviri, iwe unogona kuramba uri padyo nevanhu vaunoda kuburikidza nekutumira mameseji. Iwe unogona kutumira vadiwa vako zvinyorwa, mapikicha, uye mavhidhiyo pachivande.
Anogovana akaronga. Ichi chikamu chinosanganisira zvinyorwa zvakagovaniswa zvekushambadzira, kalendari, kutaurirana, zvinyorwa zvinogona kushandura, uye nzvimbo yekutarisa. Kuburikidza neakarongwa akagovaniswa, hauzombopotsa chiitiko chakakosha, zuva rekucherechedzwa, uye zvakanyanya kukosha, zuva rekuzvarwa kwemudiwa. Iyo yekutarisa nzvimbo inobatsira kuona kuti wese akachengeteka.
Kugovana zviri nyore kwemifananidzo. Unogona kuzivisa mhuri yako nezvekwauri uye nezvauri kuita nekungotumira ivo mufananidzo. Ichowo, ivo vanokwanisa kutumirawo yavo kuti usazvinetsa kuti varipi uye vari kuitei.
Verizon Mhuri Inowanikwa
Dhibhodhi yemhuri - Iwe uchave nekwaniso yekuwana kune wese nzvimbo. Unogona kumisikidza nzvimbo dzinokosha, dzakadai sekuti “kumba,” “kuchitoro chechitoro,” kana kuti “kuchikoro.” Kuti zviite nyore.
Mepu - Kana iwe uchinetseka kuti mwana wako ari munzvimbo yausingazivi, iwe unogona kuitarisisa kuburikidza nemepu yeapp. Iwe unogona kuchinjira kuchiri kutarisa satellite kuti utarise pedyo.
Nhoroondo yenzvimbo - Kana iwe uri munhu akabatikana, hapana chikonzero chekusaina kupinda mukati mezuva rega rega kuti uone kwave kupi nevanhu vese. Unogona kutarisa kuti mhuri yako yanga iri kupi kusvika svondo radzoka.
Rondedzero zviziviso - Unogona kuseta nzvimbo yekuzivisa pane yako nharembozha yenguva yakatarwa. Iwe unogona zvakare kushandura iyo app kuitira kuti ugone kugamuchira zvigadziriso kana nhengo dzemhuri dziri kufamba, dzakadai sekubuda mumba uye kusvika pachikoro.
Iwe unogona kunakidzwa iyi app mahara kwemwedzi mumwe. Mushure meizvozvo, iwe uchazopihwa $ 9.99 pamwedzi, iri bhajeti-huchenjeri.
Nehurombo, haisi kuwanikwa zvakananga paApple Store uye Google Play Store. Iwe unofanirwa kuitora kubva ku webhusaiti yeVerizon.
GPSWOX Mhuri Inowanikwa
Yechokwadi-nguva yekutevera - Unogona kutevedzera waunoda, angave ari munhu, mota, kana mbozhanhare mbozha, chaiyo-nguva. Unogona kutarisa yakakosha info, sekumhanya kwavanofamba, nzvimbo chaiyo, logs dzekufamba, uye kunyange yavo peturu yekushandisa.
Gamuchira zviziviso ipapo-Unogamuchira zviziviso nekukurumidza zvine chekuita nechinhu chauri kuongorora; sekunge pavanopinda vobva vabuda geo-zone, uye kana vachimhanya kana kugadzira vanomira. Iwe zvakare uchaziviswa kana nharembozha ikabiwa.
Mishumo Yakakwana - Unogona kurodha mishumo munzira dzakasiyana siyana: TXT, CSV, PDF, uye XLS. Mishumo yacho inosanganisira ruzivo rwakakosha, hwakadai sekufambisa maawa, famba famba, kumisa, kunwa peturu, nezvimwe.
Kuchengetedza peturu - Sezvo iwe uchizowana chirevo pamusoro pekushandisa peturu, iwe unokwanisa kugadzirisa nekumhanyisa uye nenzira yaunomhanya yekuchengetedza mafuta.
Kutungamira kwega-Izvi zvinokuita kuti uise miganhu yenzvimbo yauri kufarira. Iwe unogashira ziviso pakarepo kana munhu wauri kutarisa apinda uye abva panzvimbo yacho.
Pfungwa yeChidimbu Chekufarira - Chishandiso chePPI chinoita kuti iwe ugone kuwedzera zviratidzo kunzvimbo dzaunowanzoenda, dzakadai sechitoro, chikoro, chiteshi chegesi, nzvimbo yekudyira, uye nyangwe hotera. Iwe unogona zvakare kuwedzera tsananguro pane idzi nzvimbo. Chishandiso ichi chichaverengerawo kureba pakati penzvimbo dzakati pamepu yako.
Nharembozha yekutevera - Unogona kushandisa iyi App kuronda nhare mbozha.
Sezvo iri anti-kuba application, iyo inokwanisa kuvanza kubva kune menyu maapps.
Iyo ine switch yekutanga yekutanga nekumisa iyo app, iyo inobatsira mumamiriro ezvinhu apo muridzi wefoni mbozha haadi kuishandisa.
Dziviriro yeDhipatimendi reDziviriro rinodzivirira mbavha kubva mukukanganisa Cerberus nekudaita password isati yavharwa.
Chinhu cheFake Shutdown chinonyengedza mbavha nekutevera zviito zvefoni inodzima.
Iyo Bhodhi Status Bar ichavharira mbavha kubva kuMenyu yakakurumidza Menyu.
Kuzvibata Photo Kutora kuchatora pikicha kana munhu apinda nenzira isiri iyo password kakawanda. Mushure mekutora iyo foto, inotumirwa otomatiki kune iyo email yawaishandisa kuisa account yako.
SIM Checker. Kana mbavha ikangobata mbozha mbozhanhare, chinhu chekutanga chavachaita kubvisa sim kadhi kuti iite kuti isagoneka. Paunenge uine Cerberus app yakaiswa, yako sim kadhi uye nhamba iri pane yako sim slot ichave yakanyoreswa. Kamwe iyo sim kadhi nhamba uye sim kadhi kadhi hazvifananidzi kune izvo zvavanenge vari pane dhatabhesi yavo, iwe uchaudzwa uye uchapihwa ruzivo rwemusi mutsva nenzvimbo yefoni mbozha.
Iyo Prey Anti-yekuba App yakagadzirirwa kunyanya kutsvaga nzvimbo. Iyi puratifomu haina kudya zvakawandisa kuchengetedza kuitira kuti app igone kushanda zvakanaka isina kushomeka uye kusarudzika zviitiko.
Iyo app inogona kumhanya muIOS, Android, Mac, Linux, uye Windows uchishandisa System
Kuti uzive zvakawanda nezve iyi App, tinya apa.
With iyi app, iwe haudikanwe kusaina-up. Ingoisa chishandiso, uye tsvaga nzvimbo yacho.
Iwe unogona kugadzira boka kuti ugare uchigara uchifambirana nemhuri, hama neshamwari.
Iyo irinowira pasi ndiyo inogona kudhira bhatiri renhare yako nekukurumidza.
Chimwe chinoshandiswa nemushandisi chakaomarara kushandisa.
GPS Tracker (Nzvimbo Nzvimbo Tracking)
Kuti uongorore nharembozha, uri kushandisa yako GPS yeGPS.
Kuburikidza neapp iyi, iwe unogona kutsvaga imwe iPhone uye ona zviitiko zvemuridzi mukati maawa gumi nemaviri apfuura.
Iyo mvumo-yakavakirwa system inoita kuti ugone kugamuchira kana kuramba vamwe varidzi ve iPhone kuti ikutevere.
Iko kune GPS sarudzo saka iwe unogona kudzora mashandisiro ebheti rako re iPhone.
Iko kunyorera kunokurumidza uye nyore.
Iwe unogona kutsvaga iPhones dzakabiwa kana dzakarasika.
Iyo iripo pasi kune iyi ndeyekuti iwe uchiri kufanira kukumbira mvumo kubva kumunhu waunoda kutevera. Saka, kana mwana wako asingade kuti iwe uzive kwaari kupi, anogona kukuramba kuramba mvumo yako.
Iyi Anwendung ndeye GPS tracker iyo inomhanya kwete chete muPhones asiwo mu Windows uye Android.
Iyo inogovera mamiriro ako mune chaiyo-nguva. Izvi zvinoreva kuti mhuri yako uye shamwari dzinotevera unogona kuona zvauri kuita rarama.
Inoteedzera kumhanya, kukwira, kure, uye urefu.
Inotora uye kurongedza mifananidzo painenge ichitarisa.
Iyo inogona kuseta mauto emhanya anoongorora vakawanda vatori vechikamu.
Ndiyo yakanakira mabasa emabasa akadai sekukwira nhanho, kumhanya, kuchovha bhasikoro, uye kunyangwe nzendo dzemumigwagwa!
Iwe unokwanisa kudzora yako marekodhi rekodhi mu yako LocaToWeb account.
Usati iwe waisa iyo app, iwe unofanirwa kutanga uchitenga pa $ 2.49, iyo yakanaka kune yako bhajeti.
GPS Nzvimbo Inoteedzera neInoteMee
Followmee's GPS Nzvimbo Tracker app inoshandura yako Windows, iOS, kana nhare mbozha yeAroid kuita chishandiso chekutevera GPS
Kuti uteedzere mumwe munhu, uchafanirwa kuisa programu pane mbozhanhare dzadzo.
Iwe unogona kutevera kwavo nzvimbo kuburikidza webhusaiti yavo.
Kune iro rakabhadharwa vhezheni, iwe uchave kukwanisa kuona kuti varipi mukati memazuva matatu apfuura.
Kune iri yemahara vhezheni, unogona kungoona ikozvino nzvimbo.
Ivo vanopa iyo Yakawedzerwa Nhoroondo, iyo inoita kuti iwe utarise munhu kubva kumavhiki maviri kusvika pamakore matatu, zvichienderana nekunyorera kwako.
Iwe unogona kutarisa zvinopfuura chishandiso chimwe. Kana iwe uri kuishandisa kune bhizinesi, zvinokurudzirwa kuti ushandise imwe account kune ako ese mafoni zvikamu. Nenzira iyi, iwe unoona zvese izvi zvishandiso mumepu imwe.
Iyo nhare yekutevera inoteedzera inotsigira Android, iOS, Blackberry, uye Windows.
Zvakajairika zvemahara maapplication kushandira kushambadza kana iwe uchinge wazviisa. Asi, kwete ino! Ivo havashambadziri kushambadzira pane yavo mobile tracking app uye webhusaiti.
Iwe unogona kuseta boka kune ako mafoni madhiri. Unogona kutarisa mepu neboka uyezve kuita kuti vamwe vaone boka rako renharembozha.
Iwe unogona kuwedzera mumwe mushandisi seakaunzi account. Mushandisi uyu anobvumidzwa kutarisa nzvimbo yeyako kifaa. Ichi chiitiko, pamwe chete nemidziyo yakaiswa mumapoka, icharega maneja wekugadzirisa akaunzi iwane mukana chete pane iyo mafoni eboka rekugadzirisa, uye maneja wekutengesa anogona chete kuwana kune avo eboka rinotengesa.
Iyo Login Token ficha inoita kuti vashandi vatore nharembozha pasina kuburitsa nhoroondo yeakaundi yako.
Maitiro Ekuona Kana Iwe Uri Kuvengwa
Nepo vazhinji vedu tichida kuongorora vadiwa vedu nevashandi, imwe nyaya kana zvikaitika kwatiri zvichitariswa kana kutariswa. Sekuda kwatinoita aya mafoni ekutevera uye spy software, hatidi kuti iwo ashandiswe patiri. Ngatizvitarisei izvi: Sevanhu vakuru, tinoda kuchengetedza hupenyu hwedu nguva zhinji.
Unogona kunge uchifunga kuti hausi panjodzi sezvo usiri munhu weruzhinji. Asi, havasi ivo chete vanamuzvinabhizinesi, vezvematongerwo enyika, uye vevanhu vanozivikanwa vari panjodzi yekuongororwa. Kana iwe ukasaziva, kutsvaira nharembozha kwanyanya nhasi.
Waunoshandira kana maneja angave achikutsvanira kuti uone zvawanga uchiita mukuchinja kwako. Mukadzi wako anogona kunge achitsvaga nzvimbo yako kuti awone zvawanga uri kumusoro iwe uchiri kure. Iwe unogona kunge uri achiri kuyaruka ane vabereki vanochengetedza zvakanyanya, uye vanogona kunge vachikutsvanira iwe kubva pawabuda mumba. Rondedzero inoenderera.
Saka, zvinoita here kuti uone kana nharembozha dzedu dzichitorwa?
Nhau dzakanaka ndedzekuti, hongu, zvinobvira. Heano maitiro:
Cherechedza maitiro efoni yako. Chako mbozhanhare ichaita mamwe maitiro asina kujairika kana tracking kana spy software yakaiswa. Iwe unogona kukurumidza kuziva shanduko kana iwe ukavaona vachiona. Mamwe emamwe maitiro asina kujairika ndeaya:
Inoratidza icons zvisina kujairika.
Isiri yega rinovhara pasi kunyange kana bhatiri rako rizere.
Chiso chinotenderera chitaurika.
Inogadzira zvisinetsi masaini.
Yako GPS inogara iri.
Kunyangwe kana foni yako parutivi ichimira, ichiri kushandisa iWi-Fi neBluetooth network.
Tarisa bhatiri rako. Kana software yekutevera mbozhanhare yakaiswa pane yako nharembozha, bhatiri iri kuenda kunoshanda zvakapetwa kaviri kana ichinge yakamira. Aya maapplication achadurura bhatiri rako nekukurumidza. Kana iwe waona kuti wanga uchibhadhara foni yako kazhinji; pane mukana wekuti iwe uri kutariswa.
Tarisa uone kushandisa kwako data. Kana kushandisa kwako data kwawedzera zvinoshamisa, zvinoita kuti mumwe munhu arikusvetukira pauri. Nhare dzichangoburwa izvozvi dzinogona kukuratidza pfupiso yekushandiswa kwedata rako. Kana iwe usina chinhu ichi, unogona kurodha imwe paApp Store neGoogle Play Store.
Jailbreaking uye midzi. Kana nharembozha yako yaenda kuburikidza nekuputswa kwejeri nekudzura midzi, uye hauna chekuita nazvo, zvinogona kunge zviri nekuti spy rekufambisa kana nhare yekushandisa yaiswa munguva pfupi yapfuura.
Zvaungaita Kana Uchinge Uchipurwa
Izvo hazvizove zvisingabviri kune chero munhu kuti ave munyadzi wekubiridzira kana kubira. Saka, zviri nani kuti zvisaitike. Nekudaro, kana iwe ukaona kuti mumwe munhu ari kukusheedzera, chinhu chekutanga chaunofanira kuita kugara wakadzikama. Usatya! Zviri zororo kuti urikuziva izvozvi kuti nharembozha yako iri kuteverwa.
Edza kudzima programu. Kana iri spy software, ungatadza kuibvisa nekuti zvinoda maakaunti ehupfumi emunhu ari kukusvora.
Edza kuita patsva kumafekitori ezvirongwa. Ndinovimba, izvi zvichashanda.
Ita rundown kuti uve nechokwadi chekuti tracking application yaenda.
Wakarasikirwa nhare mbozha yako here? Kana kuti pamwe anoda kutsvaga munhu ane mamaira ari kure newe? Chero chikonzero nei iwe uine mupfungwa, zvakakosha kuti iwe uzvichengete iwe pachako uine ruzivo nezve kuchengeteka kwako uye chengetedzo.
Pane zvakawanda zvakanaka zvaunogona kuwana kana iwe ukashandisa mobile tracking kana spy app. Iwe unogona kutarisisa nhamba yenhare, uye unogona kuvandudzwa nguva dzese nekwavanoita mabasa nenzvimbo. Asi, kana iwe usingade kuongororwa, chengeta mafoni ako ari padyo newe nguva dzose, uye kana uchida kuisiya, kukiya foni yako uye kudzorera password. Nenzira iyi, hapana munhu anogona kuwana foni yako nekuimisikidza neyekutevedza app.